Okuyigugu zokwelapha ngesikhathi esifanayo, esibulalayo esinoshevu - kuyinto ngumhlonyane. Wayaziwa ezinsukwini sikaHippocrates, Paracelsus futhi Avicenna njengoba utshani-killer anti-isimila ejenti. ERoma lasendulo lalibizwa "ngumhlonyane", kanye naseGrisi lasendulo - "kokeyon". Futhi-Athene juice ngumhlonyane elasetshenziselwa nokubulala labo isigwebo sokufa ngokungafanele. Ngale ndlela babonisa abanye lwesintu - ushevu obulala nabuhlungu. Umlando usitshela ukuthi sinqunyelwe ukufa Antique Court USocrates wadliswa ushevu ngumhlonyane juice ke. Futhi ngesikhathi esifanayo, ngaso sonke isikhathi tincture (ngumhlonyane) yayisetshenziswa njengesikhungo "ikhambi ekhazimulayo umdlavuza" - ngakho wathi udokotela odumile saseVienna Karl Stark.
A isithakazelo yamuva kule isitshalo liye landa kakhulu. It sekutholakele ukuthi kuba stimulator enamandla kakhulu amasosha omzimba okuyiwo enza futhi kuqinise ukuzivikela zomzimba. Kule ndaba, Abelapha abaningi batusa ukulifaka ukuqoqwa amakhambi ekwelapheni izifo ezihlukahlukene. Enye tincture - ngumhlonyane - has analgesic eziqine, sine-anti-isimila nomphumela eqeda ukuvuvukala. Ngo Folk imithi, i-tincture iphathwa eziningi zomdlavuza, ezifana umdlavuza wendlala yabesilisa, webele, isibindi, esiswini, kwesibeletho kanye nabanye.
Enye kwelashwa nekufakwa ngumhlonyane kakhulu ngempumelelo kwabanye izimila kungavamile ukuba ingozi, ezifana endometriosis, lesizalo fibroids, polyp wesibeletho endometrial, adenoma we wendlala yabesilisa, webele. Hemlock futhi kusiza esinyeni polyp, ikholoni, esiswini, amalaka, nasopharynx, nabanye. Kodwa ukwelapha kwakhe ngokuqapha, njengoba lesi sitshalo enobuthi kakhulu. Ukweqisa izidakamizwa akuvunyelwe.
Oncologists ukuncoma unattenuated iyagula futhi sekudlule ngemisebe nangamakhemikhali elandelayo indlela kokuthatha lesi imithi. Lapha tincture (ngumhlonyane) samukelwa kuyanda kuya ku-15 amathonsi ngosuku. izilinganiso okunjalo kufanele ilandelwe aze belashwa. Ukwelashwa ngale ndlela kubonisa onesibalo esikhulu yokutakula, ngemva 15 amathonsi - umthamo mnene futhi kahle. Uma iseli enempilo umsebenzi is hhayi engasenamahloni. Futhi, balithathe eziningi amaconsi izidakamizwa, isiguli suppresses isimila ngaphandle ukulinyazwa emzimbeni.
Futhi iziguli amathuba mzimba, ngumhlonyane (tincture) sitholwa ngakolunye - "lasebukhosini" - indlela. Umuthi kumele kuthathwe kanye nsuku zonke ku elingenalutho ihora esiswini elilodwa ngaphambi kokudla. Kulokhu, inkambo iqala iconsi elilodwa, futhi wanezela nsukuzonke oyedwa. Futhi sifinyelela phezulu 40 amathonsi ngosuku, umthamo kufanele kube ezansi iconsi, futhi ngemva kwalokho abuyela iconsi. Ukulungiswa buhlanjululwe ngamanzi. Ekuqaleni, 100 ml, khona-ke 13 sehla njalo ezengeziwe 50 namamililitha yamanzi. Futhi uma kukhona okungenani ezinye zezimpawu ubuthi (isiyezi, isicanucanu ubuthaka imilenze), kufanele ngokushesha saqala ukunciphisa umthamo, okuholela ukwehla.
impilo Overdose eziwohlokayo ngokushesha, izinqubo ukuvuvukala uqale. Kube sekulandela stop wezinsuku ezintathu kokuthatha lesi imithi futhi wenze ababuthakathaka isixazululo potassium permanganate, buhlanjululwe ngobisi. Khona-ke aphinde abuyele izindlela ezifana tincture "Hemlock": ngokuthatha izidakamizwa, wehlise Isikali komunye iconsi. Futhi ukuze ukwazi ukuchitha ngonyaka 2-3 elandelanayo. Uma imishanguzo ibe yi omuhle, elinye 1-2 imijikelezo ke kungaba liphindwe ngemuva kwezinyanga eziyisithupha. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi esiphezulu umthamo kuvunyelwe kubantu 40 amathonsi tincture. Kodwa le ndlela akuphephile, ngoba akuzona zonke umzimba ungakwazi ukumelana nakakhulu leyo misebenzi: ngokuvamile ngemva 25 amathonsi ingozi zone iqala. Lapha ikakhulukazi kubalulekile ukuqapha isimo sabo.
Uwoyela Thistle: ukusetshenziswa e amaphilisi. Izibuyekezo ekwelapheni somkhaya uwoyela
Oats: izakhiwo zokwelapha kanye isicelo
Small ikhompyutha amatafula ze ezindlini ezincane
Izikhangibavakashi Riga - usayikhumbula eliyingqayizivele